Dhageyso wareysi: Xog laga bixiyey qaabkii lagu sii daayey Qalbi-Dhagax - Caasimada Online
Home Warar Dhageyso wareysi: Xog laga bixiyey qaabkii lagu sii daayey Qalbi-Dhagax
Dhageyso wareysi: Xog laga bixiyey qaabkii lagu sii daayey Qalbi-Dhagax
Addis-Ababa (Caasimada Online) – Cabdikariim Muuse Qalbi Dhagax oo ahaa sarkaal ka tirsan ururka ONLF oo ay bishii August ee sannadkii hore dawladda Soomaaliya u gacan gelisay dawladda Itoobiya ayaa maanta laga sii daayey xabsi ku yaalla magaalada Addis Ababa.
Sii daynta Qalbi-Dhagax ayaa waxaa markii hore shaaca ka qaaday guddiga xuquuqda aadanaha ismaamulka Soomaalida Itoobiya, oo gurigiisa ku booqday, kuwaas oo sheegay inuu caafimaad qabo, islamarkaana waqti la qaadanayo qoyskiisa.
Suldaan Fawzi Maxamed Cali oo ka mid ah hoggaamiyayaasha dhaqanka ee Soomaalida Itoobiya oo ka mid ahaa hoggaamiyayaahsii loo sii daayey Qalbi Dhagax ayaa sidoo kale xaqiijiyey islamarkaana faahfaahiyey qaabka loo sii daayey.
Waxa uu sheegay in Qalbi-Dhagax lasii daayey saaka sideeddii subaxnimo, islamarkaana uu caafimaad qabo, isaga oo intaas ku daray inuu joogi doono dalka Ethiopia.
Tallabada lagu sii daayey Qalbidhagax ayaa la sheegay inay qeyb ka tahay qorshaha isbeddelka uu wado ra’iisul wasarae Abiy Ahmed, uuna ku doonayo inuu ku kasbado bulshooyinka kala duwan ee Itoobiya, isaga oo horey usii daayey rag badan oo mucaaradka qowmiyadaha kala duwan ee Itoobiya ka mid ah.
Hoos ka dhageyso wareysiga Suldaan Fawzi Maxamed Cali